အပျောက်တိုက်ခန်းဝယ်တဲ့ စာချုပ် မှတ်ပုံတင်လို.ရမရ | Danya Wadi
»ဥပဒေ»အပျောက်တိုက်ခန်းဝယ်တဲ့ စာချုပ် မှတ်ပုံတင်လို.ရမရ
Posted by danyawadi on November 21, 2015 in ဥပဒေ
Posted by အေးမြတ်သူ
ဥပဒေအရတော့ မှတ်ပုံတင်စာချုပ် မလုပ်လဲ ဖြစ်တယ်။
စုပေါင်းမြေပိုင် ကြတဲ့အပျောက် တိုက်ခန်းတွေ
အတွက် ကတော့ မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ပြုလုပ်လျှင်ပို၍ အကျိုးထူးပါတယ်။ ဘဏ်ပေါင်လို.လဲ ရတယ်ပေါ့။
ကွန်ဒိုတွေက ပိုပြီး လုပ်သင့်ပါတယ်။
မှတ်ပုံတင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ် ဆိုရင်တော့ ကာလတန်ဖိုး စိစစ်ရေး အဖွဲ. (ရာဖြတ်) ကို တင်ပြီးမှသာ တန်ဖိုးသိကြရ မှာ ပါ။ ၅%အခွန်တော် ခေါင်းကပ်ရဦးမယ်လေ။
၁၉၆၀ပြည့်နှစ် မြို.ပြဆိုင်ရာ ငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေး အက် ဥပဒေပုဒ်မ-၂(ဂ)ရဲ. သတ်မှတ်ချက်အရ၊ အပျောက် တိုက်ခန်းပိုင်ရှင် တစ်ဦးသည် အိမ်ရှင်/မြေရှင် တစ်ဦး အဖြစ် ဖွင့်ဆိုထားခြင်း မရှိဘဲ။
ပုဒ်မ – ၁၂(၁)၏ ဖွင့်ဆိုချက် စည်းကမ်းများအရ၊ အပျောက်တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်သည် အိမ်ငှားတစ်ဦး၏ အခွင့်အရေး၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် သာပတ်သက် နေပါသည်။
သို.ပါ၍ အပျောက်တိုက်ခန်း အဝယ်စာချုပ်အား မှတ်ပုံတင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် အဆင်မပြေပါ။ သို.သော် စုပေါင်းမြေပိုင်ဆိုင်မှု ရရှိထားသည့်၊ အပျောက်တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်များနှင့် ကွန်ဒိုပိုင်ရှင်များကတော့ မှတ်ပုံတင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းပြုလုပ်ထား သင့်ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင် ပါရှိပြီးသား ဥပဒေများက အိမ်ခြံမြေ အတွက် ပြည့်စုံလှပါသည်။ အဂတိလိုက်စားခြင်းများ ကင်းဝေးမည်ဆိုလျှင် ကွန်ဒိုဥပဒေ သီးခြားလိုအပ်မည် မဟုတ်ပါ။ လိုက်စားခြင်း ရှိနေလို.ကတော့ ကွန်ဒိုဥပဒေ ထွက်လာလည်း ထူးခြားနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
Credit : Kyi Soe (I.C)
← အစိုးရသစ်နှင့်ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာကို ဆက်လက် ကူညီရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အိုဘားမားအား တိုက်တွန်းမည်
​ရွေး​ကောက်ပွဲ အနိုင်အရှုံး ရလဒ်များ အပြီးသတ်ကြေညာ →